ငယ်စဉ်ဘဝအကြောင်းလေးတွေ ပြန်တွေးမိတိုင်း အတွေးထဲဝင်လာလေ့ရှိသည်မှာ ကျေးလက်တောရွာ၌ နေခဲ့စဉ်က အကြောင်းလေးတွေပဲ ဖြစ်သည်။ မြို့ပေါ်မှာမွေး၊ မြို့ပေါ်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့သော်လည်း ဆွေမျိုးတွေရှိသည့် တောရွာကလေးကို ကျွန်တော်ခင်တွယ်လွန်းပါသည်။ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်း နှစ်စဉ်သွားလည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်မေမေ တစ်ယောက်သာ အိမ်ထောင်ကျပြီးမြို့ကို ရောက်လာခဲ့သော်လည်း မေမေ၏ ဆွေမျိုးများအားလုံးကကျေးလက်တောရွာတွင်သာ နေထိုင်ကြသည်။ ဆုံးပါးသွားသည့် အဖိုးက လွဲလျှင် အဖွား ၊ ဦးလေးနှစ်ယောက် နှင့် ဒေါ်လေးတို့ မိသားစုရှိနေကြသည်။ ဒါက ဆွေမျိုးအရင်းအချာကြီးတွေ။
တွံတေးတူးမြောင်းအလွန်တွင်ရှိသော ကရင်ချောင်းအစမှသည် တွံတေးတောကြီးတန်းရွာအထိ ချောင်းရိုး အတိုင်း တည်ထားသော ရွာစဉ်တစ်လျှောက်တွင် အဖိုးလေး၊ အဖွားလေးနှင့် ဦးလေး၊ အဒေါ်တစ်ဝမ်းကွဲတွေ ၊ ညီအကို နှစ်ဝမ်းကွဲ သုံးဝမ်းကွဲစသည့် ဆွေမျိုးတို့က များပြားလှသည်။ မော်တော်က တွံတေးတူးမြောင်းကို ဖြတ်သန်းပြီးသည်နှင့် ကရင်ချောင်းထဲသို့ဝင်လာပြီ။ ကျွန်တော်က မော်တော်ပေါ်ကနေ ကရင်ချောင်း အဝင်ဝမှစ၍ ချောင်းကမ်းနဖူး အိမ်များကို ကြည့်ငေးသွားသည်။
ရေချိုးဆင်းနေသည့် ဆွေမျိုးများ၊ အိမ်ပြတင်းပေါက်မှ လှမ်းကြည့်နေသော ဆွေမျိုးများ၊ နောက်ဖေး ရေကပြင်တွင် တခုခု ဆေးကြောနေသော ဆွေမျိုးများကို တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက် တွေ့ရတတ်သည်။ နွေရာသီတွင် ကရင်ချောင်းက သိပ်မကျယ်လှ။ ဒီတော့ ဆွေမျိုးတစ်ယောက်ယောက်ကို တွေ့လျှင် မော်တော်ပေါ်က လက်လှမ်းပြမိသည်။ သူတို့ကလည်း ပြန်လည်ပြီးလက်ပြကြ၊ လှမ်းအော်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
“ ဝေး...ငါတို့ဘက် လာခဲ့အုံးနော့”
ထိုစကားကို ကရင်သံဝဲဝဲလေးဖြင့်အော်၍ဖြစ်စေ၊ လက်ဟန်ခြေဟန်ဖြင့် ဖြစ်စေ ဖော်ပြကြသည်။ အဖွားနေသောရွာကို ရောက်ပြီး ရက်အနည်းငယ်ကြာလျင် ပဲ့ထောင်စက်လှေဖြင့် ဆွေမျိုးများက ကိုယ်တိုင် လာရောက်ခေါ်ကြသည်။ ဟန်ပန်တွေမရှိ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ ထည့်မတွေးဘဲ ရွာရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ကျွေးမွေးဧည့်ခံချင်၍ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော ဖော်ရွေခြင်း၊ ဖြူစင်ခြင်းတွေကြောင့် အမေ့ဘက်က ဆွေမျိုးတွေကိုသာ ကျွန်တော်ချစ်သည်။ သတိတရရှိသည်။ ရွာဓလေ့ ရွာအငွေ့အသက်ကို အခုချိန်ထိ ခံစား၍ ရတုန်းဖြစ်သည်။
စီးလာသည့်မော်တော်မှာ ကရင်ချောင်းထဲသို့ တဖြေးဖြေး ဝင်လာသည်။ ဘယ်သူ့ကိုများ တွေ့လေမလဲဟု ဆွေမျိုးများအိမ်ကို ကြည့်ငေးရင်းဖြင့် ကျွန်တော့်တွင်ပျင်းရိငြီးငွေ့စိတ်တို့ မရှိတော့။ ထိုသို့ဖြင့် ကမ်းနံဘေး ရွာတလျှောက်ကို ဖြတ်သန်းရင်း မေမေ့ကို မွေးဖွားခဲ့သည့် ကျုံဖား ကျေးရွာအပိုင်းကို ရောက်သွားတော့သည်။ ဖွားစိမ်းဟု ခေါ်ကြသည့် ကျွန်တော့်အဖွား၏ ရေချိုးဆိပ်တွင် မော်တော်ကပ်ပေးသည်။ ကမ်းမကပ်ခင်ထဲက ကျွန်တော်က အထုပ်အပိုးတွေဆွဲကာ ဆင်းရန် မော်တော်ဦးပေါ်တွင် အဆင်သင့်ဖြစ်နေတော့သည်။ မော်တော်ဆိုက်ကပ်တာ မြင်သည်နှင့် ညီအကိုတွေ ဦးလေးတွေ အဒေါ်တွေက ကမ်းနဖူး ဆင်းလာကြိုကြပြီ။
အဖွား အိမ်မှာ အထုတ်အပိုးတွေ ချထားပြီသည်နှင့် နွေရာသီမှာ ကြည်လင်နေသည့် ကရင်ချောင်းထဲမှာ ရေဆင်းကူးဖို့ ကျွန်တော် စိတ်အားတက်ကြွနေပြီ။ သို့သော် ... ဒီအတိုင်း မဆင်းရဲသေး။ ညီအကိုတွေ ခေါ်ပြီး ဖောင်လုပ်ဖို့ငှက်ပျောပင် သုံးပင်လောက် လိုက်ခုတ်ရသည်။ ရွာမှာက ငှက်ပျောပင်တွေ သိပ်ပေါသည်။ ငှက်ပျောတုံးတွေကို အရွယ်ညီ ခုတ်ပိုင်း၊ ရှေ့တဖက် နောက်တဖက် တံစို့ထိုးပြီး ငှက်ပျောခွံကြိုးဖြင့် ခိုင်ခိုင်တုပ်ရသည်။ ဒါဆို.. ရေကူးဖို့ ဖောင်ရပြီ။ ထို့နောက် ချောင်းထဲကို ငှက်ပျောဖောင် သယ်ချလာတော့သည်။ ဆယ့်သုံး၊လေးနှစ်အရွယ်ထိ ကျွန်တော် ရေမကူးတတ်သေး၊ ရေမကူးရဲသေး။ ဒီတော့ ငှက်ပျောဖောင် အားကိုးနှင့်သာ ရေထဲ ဆင်းရဲသည်။
ရွာရောက်ပြီး နှစ်ရက် သုံးရက်ခန့်ဆို ကျွန်တော် ရေကူးရဲသွားပြီ။ သို့သော် ရေပြင်ကျယ်တွင်ကူးခြင်းမဟုတ်။ ကမ်းနဖူး ခြေတမှီမှာ ရေကူးသည်ဆိုရုံ တဗွမ်းဗွမ်းမြည်အောင် ကူးခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရေချိုးဆိပ်ဆင်းသည့်အခါတိုင်းလည်း ဆားလက်တဆုပ်ခန့် ယူချလာလေ့ရှိသည်။ ချောင်းကမ်းစပ်မှာက သရက်ပင်တွေ အစီအရီရှိ၏။ တာလမ်းမပေါ်က ရွှံ့ခဲ ခပ်မာမာကောက်ပြီး လှမ်းပစ်လိုက်လျှင် သရက်သီးများ တဖြုတ်ဖြုတ် ပြုတ်ကျလာတော့သည်။ အသီးညှာတံဘက်ကို သရက်ပင်နှင့် အားပါးတရ ထုခွဲလိုက်သည့်အခါ သရက်သီးက အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာဖြစ်သွားတော့သည်။ ထိုသရက်သီးမွှာတွေကို ချောင်းရေနှင့် လှုပ်ခတ်ဆေးကာ ယူလာသည့် ဆားနှင့် တို့စားကြသည်။ ဒါကိုက နွေရာသီ ရောက်တိုင်း ရွာကို သွားလည်ချင်သည့် အကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်မည်။ ရေချိုးခြင်း ကဏ္ဍက သည်လောက်နှင့်တင် မပြီးသေး။
ရေထဲဆင်းလျှင် ကျွန်တော်က ဒိုင်းဝန်းတစ်ခု ယူသွားသေးသည်။ ဒိုင်းဝန်းဆိုသည်မှာ ငါးဖမ်းသည့် ဇကာပိုက် တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အနားပတ်လည်ကို ဝါးဘောင်ဖြင့် အဝိုင်းခွေထားပြီး အလယ်တွင် ဇကာပိုက် ကို တပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျန်သည့်ညီအကိုတွေအတွက်က ဒိုင်းဝန်းမလို။ ကမ်းနဖူးတွင် ပေါက်နေသည့် အပင်တို့၏ အောက်ခြေ အမြစ်ဆုံများထဲ လက်နှင့်လိုက်စမ်းကာ ပုဇွန်ဖမ်းကြသည်။ ငါးဖမ်းကြသည်။ သူတို့က ရေထဲမှ ငါး၊ပုဇွန်များကို လက်ဖြင့်စမ်းကာ ဖမ်းနိင်စွမ်းရှိကြသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ ကမ်းနဖူးတွင် ပေါက်နေသည့် ကျုပင်ချုံဖုတ် အောက်ခြေနားမှာ ဒိုင်းဝန်းဖြင့် လိုက်ခပ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အဖွားအိမ်ခေါင်းရင်းက ချောင်းလက်တက် အသေးလေးထဲ ဒိုင်းဝန်းလိုက်ခပ်သည်။ ဘေးကိုင်းအဝိုင်းလေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ကာ ရေထဲကိုနှစ်ပြီး လမ်းနဲနဲလျှောက်၊ ပြီးလျှင် ရေထဲမှ ဆယ်မလိုက်သည့်အခါ ဇကာပိုက်ထဲတွင် ငါးအသေးလေးများ ပုဇွန်လေးများ ကျန်ခဲ့တော့သည်။ တဆတ်ဆတ် ခုန်နေသော ပုဇွန်လေးတွေကို ဖျတ်ခနဲ လက်ဖြင့် အုပ်လိုက်သည်နှင့် လက်ဖဝါးတွင် ဆတ်ခနဲထိုးသည့် ဝေဒနာကို ခံစားရသည်။ မနာလှ။ ဖွဖွလေးသာဖြစ်သည်။
ပုဇွန်အစိမ်းစားလျင် ရေးကူးတတ်သည်တဲ့။ ချောင်းထဲမှာ မမှီမကမ်းရေကူးရင်း လူကြီးတွေ ပြောဖူးတာကြောင့် ရေကူးတတ်ချင်ဇောဖြင့် ပုဇွန်အစိမ်းကို ကလေးဘဝက စားခဲ့ဖူးသေးသည်။ ကြာလာတော့ ရေကူးတတ်လာခဲ့သည်။ ပုဇွန်အစိမ်းစား၍ ရေကူးတတ်ခဲ့သည်တော့ မဖြစ်နိင်။ အစဉ်မပြတ် ရေထဲဆင်းရင်း၊ ဆော့ကစားရင်း ကူးတတ်လာခြင်းဖြစ်မည်။ ကျွန်တော်တို့ ညီအကိုတတွေ ရေဆင်းချိူးရင်း ဖမ်းလို့ရလာသည့် ငါးကလေး ပုဇွန်ကလေးတွေကို တစ်ယောက်ယောက်က အိမ်ကို သွားပြန်ပေးပြီးလျှင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ရွှံ့နှင့်စစ်တိုက်တမ်း ကစားတော့သည်။
ရေထဲကို စွပ်ခနဲငုပ်ပြီး အောက်ခြေကရွံ့ကို လက်ဖြင့်ကော်ယူကာ နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ပစ်ပေါက်တမ်း ကစားကြခြင်းဖြစ်သည်။ သူပစ်သည့်အချိန် ကိုယ်က ရှောင်နိင်မှသက်သာသည်။ ရေနူးနေသော ရွံ့ပျော့ပျော့က ဘတ်ခနဲ ကိုယ့်ကို လာမှန်သည့်အခါ အနည်းငယ်တော့ နာကျင်ရပါသည်။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်လက်ထဲတွင် ရွံ့ခဲများ အများကြီး ပွေ့ထားနိင်လျှင်တော့ သိပ်ပျော်ရသည်။ ပထမဆုံး ရွံ့နဲနဲနှင့် တစ်ချက်လှမ်းပစ်လိုက်လျှင် တစ်ဖက်လူက ရေထဲငုပ်ကာ ရှောင်သွားသည်။ ထိုအခါမျိုးဆို လက်ထဲတွင် ရွံ့အဆင်သင့်ကိုင်ပြီး သူပြန်ပေါ်လာမည့် နေရာကို မျက်စေ့ရှင်ရှင်ဖြင့် စောင့်ကြည့်ရတော့သည်။
သူရေထဲမှ ပြန်ပေါ်လာသည်နှင့် ကိုယ့်လက်ထဲက ရွံ့ခဲက ပစ်ပြီးသား ဖြစ်တော့သည်။ လေထုထဲကို အသက်တက်ရှူရှူခြင်း ခေါင်းကို ရွံ့ခဲမှန်တော့ နောက်တစ်ကြိမ် ရေထဲ ပြန်ငုပ်သွားရပြန်သည်။ ဟိုနေရာပေါ်လာလိုက် ရွံ့နှင့်လှမ်းပစ်လိုက် ဒီနေရာပေါ်လာလိုက် ရွံ့နှင့်ထုလိုက်ဖြင့် အရှုံးမပေးမချင်း ကစားကြသည်။ နားထဲ နှာခေါင်းထဲတွင်လည်း ရွံ့တွေ တစွန်းတစ။ ဆံပင်တွေကြားမှာလည်း ရွံ့တွေက အပေပေ အလူးလူး။ အားပါးတရ ဆော့ပြီးလျှင်တော့ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ရေငုပ်ကာ ခေါင်းလျှော်ရတော့သည်။ ရွာရောက်နေချိန် နေ့စဉ် ရေကူးကြပုံတွေ။
ရေချိုးပြီး၍ ပြန်တက်သွားလျှင် ထမင်းဝိုင်းက အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ တောရွာမှာ ဟင်းစားရှားပါးတော့ ကြက်သား၊ ဝက်သား စားရဖို့ကမလွယ်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ စားကောင်းကြပါသည်။ ထမင်းဝိုင်း၏ အလယ်တွင် အကြီးဆုံးဟင်းခွက် ရှိသည်။ ထိုဟင်းက ငပိရည်ဖျော် ဖြစ်သည်။ ရေဆင်းကူးရင်း ဖမ်းမိသည့် ငါး၊ ပုဇွန်တွေကို မီးဖုတ်ပြီး ကြက်သွန်အနီ၊အဖြူနှင့် ငရုတ်သီးစိမ်း ထည့်ထောင်းကာ အချိုမှုန့်ပက်ခနဲထည့်ပြီး ဖျော်ထားသည့် ငပိရည်ဖြစ်သည်။
တို့စရာ အစုံအလင်ကလည်း ဟင်းလိုက်ပွဲကဲ့သို့ မကြာမကြာ ထယူရသည်။ ဘေးနားကဆီပြန်ငါးဟင်း ကိုတောင် ကျွန်တော် မမက်မောတော့။ ဘူးသီးပြုတ်၊ ကန်းစွန်းရွက်ပြုတ်၊ သရက်သီးစိတ် ၊ ဆူးပုတ်ရွက်ပြုတ် စသည့် တို့စရာအမယ်တွေက များပြားလှပါသည်။ ထမင်းထဲကို တို့စရာမြုပ်ကာ ငပိရည်ကို အနှစ်ပါအောင် မွှေပြီးဆမ်း၊ လက်ငါးချောင်းဖြင့် အားပါးတရ ဆုပ်စားလိုက်ရတိုင်း ထမင်းတလုတ်ချင်းစီမှာ သာယာကျေနပ်မှုက ရှိနေသည်။ ငယ်စဉ်ဘဝကို ပြန်တွေးတိုင်း ကျေးလက်တောရွာမှာ ထိုသို့ နေထိုင်စားသောက်ခဲ့ရသည်က အတွေးထဲအမြဲဝင်လာမြဲဖြစ်၏။
နောက်ထပ်မမေ့နိင်သေးသည်က သရက်သီးကောက် ကြခြင်းဖြစ်သည်။ မနက် လေး၊ငါး နာရီဆိုလျှင် ညီအကိုတွေက ကျွန်တော့်ကို နှိုးသည်။ သရက်သီးသွားကောက်ကြဖို့ ညကတည်းက ပြောထားတာကြောင့် အိပ်ယာမှလူးလဲထ မျက်နာသစ်ပြီးလျှင် လွယ်အိတ်တလုံးကို ကောက်လွယ်လိုက်သည်။ မီးအုပ်ဆောင်းနှင့် တုတ်တစ်ချောင်းကို လက်တစ်ဖက်တစ်ချက်ဆွဲရင်း သရက်ခြံတွေထဲ ညီအကိုတွေ သွားကြတော့သည်။
မနက်ဝေလီဝေလင်း။ အလင်းရောင်က မရှိသေး။ မီးအုပ်ဆောင်းမှ ထွက်သည့် အလင်းရောင် အားကိုးဖြင့်သာ တရွေ့ရွေ့သွားကြရသည်။ သရက်ခြံကြီးတွေက အကျယ်ကြီးဖြစ်သည်။ ခြံကြီးတွေထဲ ရောက်လျှင် မြေပြင်မှာ ကြွေကျနေသည့် သရက်သီး အကင်းလေး(အသေးလေး)တွေ ကောက်ကြတော့သည်။ ညဦးပိုင်းမှာ လေတွေတိုက်ထားခဲ့လျှင် သရက်သီးအကင်းလေးတွေ အများအပြားတွေ့ရတတ်သည်။ ခြံအနှံ့ လိုက်ရှာရင်း ကောက်၍ရသမျှ လွယ်အိတ်ထဲထည့်ကြသည်။
သရက်ခြံတွေက ကိုယ့်ဆွေမျိုးခြံတွေ ရှိသလို သူစိမ်းခြံတွေလည်း ရှိသည်။ သို့သော် ကြွေကျနေသည့် သရက်သီးကောက်ဖို့အတွက် ဆွေမျိုးရယ် သူစိမ်းရယ်မရှိပါ။ မည်သူမဆို ဝင်ကောက်ခွင့်ရှိသည်။ သရက်သီးကောက်သူတွေဘက်ကလည်း စည်းရှိကြပါသည်။ အသီးများများ ရချင်ဇောနှင့် အပင်ပေါ်က ရိုက်ချလေ့မရှိကြ။ ကြွေကျနေသည်များကိုသာ ကောက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ညဉ့်ဦးပိုင်းတွင် မိုး၊လေ ပြင်းထန်နေခဲ့လျင် မနက်မှာ သရက်သီး များများကောက်ရပြီဆိုပြီး ကျွန်တော်ကလေးဘဝက ပျော်နေတတ်ခဲ့ဖူးသည်။ အပင်အောက်မှာ ကြွေနေသမျှ ကောက်ပေတော့ပဲ။
ခြံရှင်တွေကိုယ်တိုင်လည်း သရက်သီး ဝင်ကောက်တတ်ကြသည်။ သူတို့နှင့် အပြိုင်ကောက်နေရသော်လည်း အားနာစရာမလို။ သရက်သီးကောက်ရင်း သတိထားဖို့ တစ်ခုသာရှိသည်။ ထိုအရာက မြွေ ။ မနက်ဝေလီဝေလင်း အလင်းရောင် ကောင်းကောင်း မရှိသေးခင် သရက်သီးကောက်ရင်း ကြွေကျနေသော သရက်ရွက်များအောက်တွင် မြွေများခွေအိပ်နေတတ်သည်။ မြွေအမြီးတက်နင်းမိလိုမိ၊ မြွေကိုခလုတ်တိုက်လိုတိုက်နှင့်။ မြွေနှင့်တိုးကြသည့် ဇာတ်လမ်းတွေက ခေတ်အဆက်ဆက် မရိုးတမ်း ကြားရမြဲဖြစ်သည်။ ထိုသတင်းတွေက မသိစိတ်ထဲအထိ ရောက်နေသည့်အခါ ခြေထောက်အောက်တွင် ပျော့စိစိအရာတခုခု တက်ဖိမိသည်နှင့် အလန့်ကြား ဆတ်ခနဲ ထခုန်လိုက်မိမြဲဖြစ်သည်။
မနက်ခြောက်နာရီကျော်လာတော့ အလင်းရောင်လည်း ရောက်ပြီ။ ကောက်စရာ သရက်သီးလည်း မရှိတော့။ သရက်သီးထည့်ထားသည့် လွယ်အိတ်လေးတွေ လွယ်ရင်းပြန်လာခဲ့ကြတော့သည်။ အိမ်ပြန်ရောက်လျှင် ထမင်းကြော်၊ ဒါမှမဟုတ် ထမင်းကြမ်းနှင့်ရောထားသည့် ရွာမုန့်ဟင်းခါးကို မနက်စာ အဖြစ်စားရသည်။ ရွာမုန့်ဟင်းခါးက မြို့နှင့်မတူ။ ဆီသတ်ထားသည့်အရောင်မရှိ။ ငါးနိင်ချင်းဖြင့်ချက်သည့် နနွင်းမှုန့်အဝါရောင် သက်သက် မုန့်ဟင်းခါးဟင်းရည်သာ ဖြစ်သည်။ မုန့်ဟင်းခါးချက်ပုံက မြို့နှင့်မတူသလို ရောင်းပုံကလည်း မြို့နှင့်မတူ။
မြစ်ရိုးတစ်လျှောက် ရွာတွေဖြစ်သည့်အတွက် ခေါင်းရွက်ဗျက်ထိုး ဈေးသည်တော်တော်ရှားသည်။ ဈေးသည်တိုင်းလိုလို ချောင်းရိုးတစ်လျှောက် လှေတစင်းနှင့်လှော်ခတ်ရင်း ရောင်းကြခြင်းဖြစ်သည်။ မုန့်ဟင်းခါးရောင်းသူက လှေဝမ်းထဲမှာ မုန့်ဟင်းခါးဟင်းရည်အိုး၊ မုန့်ဖတ်ခြင်းတောင်း၊ အကြော်ခြင်းများ ထည့်လာကြသည်။ နောက်ထပ် မပါမဖြစ်က ချိန်ခွင်။ မုန့်ဟင်းခါးကို မြို့မှာလို ပွဲအရေအတွက်နှင့် ရောင်းခြင်းမဟုတ်။ ဟင်းရည်ကို အလေးချိန်ဖြင့် ရောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဝယ်သူက ကမ်းနဖူးတွင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ ဟင်းရည်ထည့်စရာ အိုး၊ ခွက် တို့ဖြင့် စောင့်နေကြသည်။
“ဟင်းရည် ငါးဆယ်သားပေး၊ အကြော်မယူဘူး”
ဒါဆို ဈေးသည်က ဟင်းရည်တွေကို ဇလုံထဲ ခပ်ထည့်ကာ ချိန်ခွင်နှင့် ငါးဆယ်သားချိန်တော့သည်။ ဟင်းရည်အလေးချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး မုန့်ဖတ်ကို အလကားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အလကားပေးသည် ဆိုရသော်လည်း ဟင်းရည်ဖိုးထဲတွင် မုန့်ဖတ်ဖိုးပါပြီးဖြစ်မည်။ ဒါကအလေးချိန်ဖြင့် ရောင်းသည့် ရွာ၏မုန့်ဟင်းခါး ရောင်းပုံဖြစ်သည်။ ထမင်းကြမ်းနှင့် ရောထားသော မုန့်ဟင်းခါးစားပြီး ရေနွေးကြမ်း သောက်လိုက်လျှင် မနက်စာအတွက် ပြည့်စုံပြီ။
မနက် ရှစ်နာရီ ကျော်သည်နှင့် ကိုယ်ကောက်ထားသည့် သရက်သီးလွယ်အိတ်လေးတွေကို ယူပြီး ရေချိုးဆိပ် ကမ်းနဖူးမှာ ညီအစ်ကိုတစ်စု ထိုင်စောင့်ကြတော့သည်။ ကျွန်တော်တို့လိုထိုင်စောင့်ကြသည့် သူများကိုလည်း ဟိုဘက်ကမ်းတွင်ပါ တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ဤရာသီက သရက်သီးကောက်ရာသီ။ သရက်သီးအကင်းလေးများ ကြွေကျသည့် ရာသီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရွာတိုင်းတွင် သရက်သီးကောက်သူများ ရှိကြသည်။ လိုက်ဝယ်သူများ ၊ စောင့်ရောင်းသူများရှိသည်။
ထိုသရက်သီးကင်းလေးတွေက ချဉ်ဖတ်စိမ်ပြီး မြို့ပေါ်တွင် တို့စရာအဖြစ် ပြန်ရောင်းကြခြင်းဖြစ်သည်။ သရက်ကင်းချဉ်။ သရက်သီးဆားရေစိမ် စသည်ဖြင့်ပြန်ရောင်းကြသည်။ သရက်ကင်းဝယ်သည့် လှေတွေက မနက် ရှစ်နာရီခွဲခန့်မှစ၍ တနေ့တာလုံး ဥဒဟိုသွားနေကြသည်။ ချောင်းထဲမှာ လင်ကိုယ်မယားနှစ်ယောက် လှေကလေးလှော်ခတ်ရင်း “သရက်သီးဝယ်တယ်ဗျို့” ဟု အော်သံပေးကြသည်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ကမ်းနဖူးကနေ လှမ်းမေးကြသည်။ အချိန်အတွယ်က ပြည်တောင်းနှင့်ဖြစ်သည်။
“ရော်...ဒိုင်ဆီသွင်းတာတောင် ငါးကျပ်ပဲ အမြတ်ရတာကို”
တကယ်တော့ မနေ့ကလည်း တစ်ပြည်ငါးဆယ်ဈေးသာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒါက ရောင်းသူဖြစ်သည့် ကျွန်တော်တို့၏ ဈေးခေါ်နည်း။
“ မရဘူးမောင်ရေ့... မင့်အသည်သာ ဆက်စောင့်တော့”
ဈေးမတည့်လို့ လှေဆက်လှော်သွားသော်လည်း ကိစ္စမရှိ။ တစ်နေကုန် သရက်ကင်းဝယ်သည့် အသည်တွေ ဆက်တိုက်လာသည်မဟုတ်လား။ ဒီနေ့အတွက် ပေါက်ဈေးကို သိလိုက်ရပြီ။ တစ်ပြည် ငါးဆယ်။ ငါးဆယ်ထက် ဈေးပိုရအောင် ကြိုးစားဖို့ပဲကျန်တော့သည်။ မကြာပါ... နောက်..ဈေးသည် ထပ်မြင်ရပြီ။
ကရင်ရွာတွေဆိုတော့ စကားပြောတိုင်း ဝဲတဲတဲနှင့် နားထောင်ကောင်းလှသည်။
“ ရှေ့ကအသည်တောင် ငါးဆယ့်သုံးကျပ်ဗျ ငါးဆယ့်ငါးကျပ်မရလို့ မရောင်းလိုက်တာ”
“ မဟုတ်တာ...အဲဒီလောက် ဈေးမရှိဘူးလေကွယ်”
“ဒါဆိုလည်း ငါးဆယ့်သုံးကျပ်ပဲ ပေးဗျာ.. ကျွန်တော်တို့ သွားကစားချင်နေလို့”
ဤသို့ဖြင့် ဈေးသည်တွေကို အမျိုးမျိုး ဈေးကစားရင်းနှင့် မနက် ဆယ်နာရီ ကျော်ခန့်ဆို ကျွန်တော်တို့ ညီအကိုများ၏ သရက်သီးရောင်းပွဲကြီးကို အပြတ်ဖြတ်ကြသည်။ ထို့နောက် ရေချိုးဆင်း ၊ နေ့လည်စာ စားပြီးလျှင်တော့ သရက်သီးရောင်းရသည့် ငွေလေးတွေ ကိုင်ပြီး တာလမ်းဘေးက သရက်ပင်အောက်ကို သွားကြသည်။ အပင်အောက် မြေတလင်းတွင် လူစုံနေပြီ။ ထိုနေရာသည် ကျွန်တော်တို့ နေ့လည်ခင်းကို ဖြတ်သန်းမည့်နေရာဖြစ်သည်။
သရက်သီးရောင်းရငွေလေးများဖြင့် ပိုက်ဆံထောင်ပစ်ကြသည်။ ခေါင်း ၊ ပန်း လှန်ကြသည်။ နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး ပိုက်ဆံကြေး ဘော်လုံးကန်ကြသည်။ ဘော်လုံးဆိုသော်လည်း အဝတ်စုတ် အထပ်ထပ်ကို လိပ်ကာ ကြိုးဖြင့်ချည်ထားသော တစ်ထွာခန့်အရွယ်ရှိ အဝတ်လုံးသာ ဖြစ်သည်။ တခါတလေရိုးရာ နတ်စားသည့် အိမ်မှ တောင်းယူထားသော ဝက်ဆီးအိမ်အိတ်ကို လေမှုတ်ပြီး ဘောလုံးအဖြစ် ကန်ကြသည်။ ငြင်းကြ ၊ ခုန်ကြ ၊ ရန်ဖြစ်ကြရင်း ကျေးလက်တောရွာ၏ နေ့လည်ခင်းများသည် သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသည်။ ပြန်တွေးတိုင်း လွမ်းမောဖွယ်ရာသာ။
အခုဆို ကျွန်တော် ရွာကိုမရောက်ဖြစ်သည်မှာ ၇ နှစ်ခန့်ရှိပြီ။ ကျွန်တော့် ညီအစ်ကိုတစ်ဝမ်းကွဲတွေ အကုန်လုံးနီးနီးလည်း ရွာတွင် မရှိကြတော့။ မြို့ပေါ်တွင် အလုပ်အကိုင်ကိုယ်စီနှင့် ရောက်နေခဲ့ပြီ။ ရွာသို့ကျွန်တော် နောက်ဆုံးရောက်သည့် အခေါက်များတွင် အဖွားနှင့် ဦးလေး၊ အဒေါ်များမှလွဲလျှင် ကစားဖော်ကစားဖက် ညီအကိုတစ်ဝမ်းကွဲများ မရှိကြတော့ပါ။
ထိုအခါ ချောင်းထဲသို့ ရေဆင်းကူးချိန်သည် အထီးကျန်ဆန်လှပါသည်။ အရင်ကလို ရေကူးဖို့ငှက်ပျောဖောင်မဖွဲ့ဖြစ်တော့။ သရက်သီးခဲဖြင့်ထုကား ဆားနှင့် မတို့စားဖြစ်တော့။ ငါးကလေး၊ ပုဇွန်ကလေး မစမ်းဖြစ်တော့။ မနက်ဝေလီ ဝေလင်းတွင် သရက်သီးသွားမကောက်ဖြစ်တော့။
ပြန်တွေးမိတိုင်း လွယ်အိတ်ကလေးများဘေးချထားကာ ထိုင်စောင့်နေကြသော ညီအကိုတစ်စုနှင့် ချောင်းရိုးတစ်လျှောက် လှော်ခတ်သွားသော သရက်ကင်းဝယ်သည့် လှေကလေးများသည် ကျွန်တော့်အတွေးထဲတွင် ပြက်ပြက်ထင်ထင် ရှိနေသေးပါသည်။ သို့သော် ငယ်စဉ်ဘဝသည်ကား ဝေး၍ဝေး၍ ကျန်ခဲ့လေပြီ။
Posted by မြစ်ကျိုးအင်း at 2:15 PM Labels: အက်ဆေး
ဟုတ်တယ်နော် အကို ဒီအချိန်ဆို သရက်သီးတွေ ပေါ်နေပြီ..မရောက်ဘူးပေမယ့် မြင်ယောင်ရင်း သရက်သီး စားချင်လို့ :P:P:P:P
ခုချိန်ကသရက်သီးပေါ်ချိန်ဆိုတော့ ကိုမြစ်ရေးတာက အတော်ပဲ. ..
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း နဲ့ ရွာလေး ကိုသွားချင်စိတ်ပေါ်လာတယ် သိပ်ကောင်းတဲ့ အက်ဆေး လေးပါဘဲ
ရွာမှာကလေးဘ၀ကို ပြန်သတိရတယ်.. ရွာမှာတော့ ပုဇွန်တွေကို ၀ါးဆစ်ပိုင်းလေးနဲ့ထောင်တယ်.. ဒိုင်းဝန်းပစ်တယ်။ လက်နဲ့ ရေငုတ်စမ်းတယ်.. ရေခုန်ငမြင်းလို့ ခေါ်တဲ့ကောင်တွေကို ဒီအတိုင်း ၀ါးကိုင်းတံ (ငါးမျှားတံ) ဒီအတိုင်းအစိမ်းစားကြတယ်.. ရေချိုးတက်လာရင် အဖွားဖျော်ထားတဲ့ ငါးပိရည် ကျဲနဲ့ တို့စရာက ဟင်းမလို စားကောင်းတာ။
အခုတော့လဲ ဒါတွေ ဒါတွေ ပြီးခဲ့ပါပြီ၊ ပြီးခဲ့ပါပြီ.... ဒါပေမယ့်လည်း.....
လွမ်းမောစရာ ကျေးလက်အကြောင်းလေးတွေပဲ အဖြစ်ချင်းတွေကတော့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ ကျနော်လည်း ရွာကို တစ်ခါခါ တော်တော်ကိုသတိရတယ်ဗျ ။
စာရဲ့..“အနှစ်” ဆိုတာ ဒါမျိုးကိုခေါ်တာ...
အခုပဲ သရက်သီးစိမ်းစားကိုးစားရင်းဖတ်နေတာ..အရသာရှိလိုက်တာ...ရာသီ စာဆိုတာ ဒီလိုရေးတဲ့စာမျိုးနေမှာ
ကိုမြစ်လာတိုင်း အဘွားအိမ်က ဆားတွေ အကုန်မြန်မယ်နော။
ငါ ဖျာပုံကို သွားလည်တာကိုလည်း သတိရမိသွားတယ်။
ရေကူးကန်ထဲမှာပဲ ရေကူးရဲတာ မြစ်ရေထဲတော့ မကူးရဲဘူး။
အိမ်လည်ထွက်တာတောင်းး လှေနဲ့ အိမ်လည်ထွက်ကြတာ။
ဖတ်ရတာကောင်းတယ်။ စာထဲက အတိုင်း ကိုယ်ပါ ဘေးကပါနေသလိုမျိုးပဲ။
I like this article very much. It reminds me my childhood in Delta.
ကလေးတုန်းက သရက်သီး အစိမ်းအစားလွန်လို့ သွားတွေ ကျိန်းလိုက်တာ လွန်ရောဘဲ။ အခုတောင် နဲနဲ ချဉ်တဲ့ အသီး အရည် စား သောက်ရင် အဆင်မပြေဘူး။ စားသောက်ပြီးရင် သွားကျိန်းကျန်ရစ်ရော။
အဲ့လိုလေးတွေ အများကြီးးးးး ရေစေချင်တယ် ...
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက အမေကြီး (အဖွား) တို့ရွာကို ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ သွားနေရတဲ့ ဘ၀တွေကို ပြန်တမ်းတသတိရမိသွားတယ် ကိုမြစ်ကျိုးအင်းရေ....
ရေကူးတတ်ချင်ဇောဖြင့် ပုဇွန်အစိမ်းကိုစား၊ သရက်သီးကောက်ရောင်းစား ရွာဓလေ့ကိုပေါ်လွင်ပါတယ်၊ တကယ်တော့ငယ်ဘဝဆို သတိရစာတစ်ခုပါ၊ ပြန်မရတော့တဲ့အရာတွေထဲမှာပါပါတယ်၊
ငယ်ငယ်တုန်းကသရက်သီးရာသီဆုို ငပိ၊ ငံပြာရည်၊ ငရုတ်သီးမှုန့် တွေနဲ့ အကုိုတွေနဲ့ အပြိုင်စားရတာတွေသတိရမိတယ်။ စာဖတ်ရတာလည်း မျက်လုံးထဲပေါ်လာအောင်ခံစားရလို့ သဘောကျမိပါတယ်။
တစ်ရွာတစ်ပုံဆန်းပဲနော်.. မုန့် ဟင်းရည်ကို အလေးချိန်နဲ့ ရောင်းတယ်ဆိုတော့ ။ ငံပိရည် ၊ တို့ စရာ စုံလင်လှတဲ့ ထမင်းဝိုင်းကြီးကို မြင်ယောင်မိတယ်။ ကလေးဘဝ သရက်သီးတွေကောက် ရတာလည်း ပျော်စရာ ကောင်းတယ်။
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း နဲ့ ပို့စ်လေးက မပြီးချင်ပဲ ပြီးသွားတယ်
လွမ်းစရာ ရသ ၊ ကြည်နူးစရာ ရသ ၊ စတဲ့ရသတွေအစုံအလင်ပေးတဲ့အပြင် ကိုယ့်အညာနဲ့ မတူတဲ့ စရိုက်ဓလေ့အစုံကိုပါ သိခွင့်ရပါတယ် ....။
ရွာဓလေ့ ရွာစရိုက်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရွာရနံ့လေးတွေ အများကြီး ရလိုက်တဲ့ ပိုစ့်လေးပါပဲ။ ဖတ်ကောင်းလိုက်တာ...
မုန့်ဟင်းခါးဟင်းရည်က်ို အချိန်နဲ့ရောင်းတာ တစ်ခါမှမကြားဖူးဘူးဗျာ...ထမင်းကြမ်းထည့်စားတာလဲ မကြားဖူးပြန်ဘူး...တကယ်ထူးဆန်းတဲ့ ဓလေ့လေးတွေပဲ...အခုထိရေမကူးတတ်ပေမယ့် ငယ်ငယ်က မြစ်ထဲမှာ ရွှံ့စစ်တိုက်ကြတာ သွားသတိရမိတယ်...ငယ်ဘ၀ကို မမေ့ချင်ဘဲ မေ့ခဲ့ရတာ ကြာပြီကောဗျာ...
လွမ်းမောဖွယ်ရာ ငယ်ဘ၀လေးတွေပါပဲ ကိုမြစ်ရေ...း)))))
သရက်သီး စားချင်နေတာဗျ။ ရေတော့ မကူးတက်သေးဘူး။ ပုဇွန် အစိမ်းစားဦးမှပဲ။ ဟိ။
မရောက်ဖူးတဲ့ဒေသက ကိုယ်နဲ့ အကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို မျက်လုံးထဲမှာ မြင်ယောင်ပြီး စိတ်နဲ့ အကျွမ်းတဝင် ဖြစ်လာအောင် ရေးလဲရေးတတ်ပါတယ် ကိုမြစ်ကျိုးအင်းရယ်...
ရွာငပိရည်မှာ ရေချိုငါးပေါပေါဖြင့် ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာ လုပ်ကြသည်ဖြစ်သောကြောင့် မည်သည့် အရာနှင့်မျှ မတူချေ။
ထိုငပိရည်နှင့် စိုင်သီး အကင်းလေးများကို ကြီးတော်ကြီး တစ်ယောက်က စိတ်ရှည်လက်ရှည်နှင့် ခွဲ၍ရေဇလုံ၌ စိမ်ကာ တို့ စေသောကြောင့် ထို ထမင်းဝိုင်း၌ ကျနုပ် ခေါင်းမဖော်နိုင်ခဲ့ပါချေတကား။ ကိုမြစ်လည်း ဤသို့ ထင်ပါအိ...။
ကျနုပ် ရွာသို့အလည်ရောက်ချိန်မှာ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်သောကြောင့် ရွာနောက်ဖေးချောင်း (တည်းသည့်အိမ်၏ အနောက်ဖက်မှာ ကပ်ရပ်တည်ရှိ) မှာ ချောက်ကပ်နေသောကြောင့် လမ်းလျောက်ထွက်ရာ ဗွက်အိုင်ထဲ ပြုတ်ကျသဖြင့် လူကြီးများ လာဆယ်ရဖူးအိ.... ကျနုပ်နှင့် အတူလမ်းလျှောက်ထွက်သည့် အနှီပုဂ္ဂိုလ်မှာမူ အမေရိကားဟူသော အရပ်၌ နွားယူးရော ဆိုသည်မြို့တော်တွင် အရာရာကို မေ့လျော့နေလေအိ.. (ဘာမှမဆိုင် :) )။
ကျနုပ်သည် ထိုရွာရှိလူများနှင့် လုံးဝ အမျိုးအဆွေ မတော်သည့်တိုင် အကျနုပ် စားချင်သည့် အိမ်၌ မနက်စာ နေ့ ခင်းစာ ညစာကို စားနိုင်ပေသည်။ မည်သူမျှ အထူးတလည်ဖြစ်ပုံလည်းမရချေ။ ကျနုပ်စားချင်လျှင် လက်ဆေးကာ ပန်းကန်တစ်ချပ် ၀င်ဆွဲလိုက်လျှင် သူတို့ဝိုင်း၌ ရောနှောပြီး ဖြစ်လေအိ။
မီးခိုးတိတ်အလှူဟူသော စကားလုံးကို ထို အရပ်၌ အကျနုပ် ဧကံ သိမြင်ခဲ့ရပါသည်။ တစ်ရွာလုံး ထမင်း ချက်မစား သည့်အပြင် ပတ်ဝန်းကျင် ရွာ ၇ ရွာ ၈ ရွာ ခန့် က လူများ အိမ်ထောင်စုလိုက် လှည်းနှင့် လာအားပေးကြသည့် စားသောက်ပွဲကြီးကို ဧကန် မြင်တွေ့ ခဲ့ရဖူးလေသည်။
ကိုမြစ်ကဲ့သို့သရက်သီး မကောက်ခဲ့သော်ငြားလည်း ကုက္ကိုလ် သီးကောက်ကာ အစေ့များထွင်ပြီး ရွာမှ သူငယ်များအား (အမှန်တော့ မိမိထက် အသက်ကြီးအိ..) ဆရာလုပ်၍ စီးပွားရှာတတ်စေရန် သင်ကြားပေးခဲ့ဖူးလေသည်။ ကုက္ကိုလ် စေ့ လှော်သည် ရန်ကုန်မြို့၍ ငွေ အသပြာပေးကာ ၀ယ်စားရသဖြင့် အနှီမြို့သား လူလည် (အမှန်တော့ မြို့စွန်သားပါ) မှ ရွာသား ကလေးတစ်သိုက်အား ဦးဆောင်ကာ ကုက္ကိုလ် စစ်ဆင်ရေး ပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့် နွားပိုင်ရှင် ဦးကြီးများ မှ မျက်လုံး မျက်ဆံပြုးဖြင့် တောင်းပန် တာခံခဲ့ရဘူးအိ... ကုက္ကိုသီးကား ချိုသော အရသာ ရှိလေသောကြောင့် နွားများ စားသုံးကြသည်မဟုတ်လေ....
မှတ်ချက်။......။ ကိုမြစ်အား အားကျမိပါသောကြောင့် ကော်မန့် ၌ ပိုစ့်လာရေးသွားပါလေအိ။
အဲဒီအရွယ်ထဲကဈေးကစားတတ်နေပြီ... တော်တာပေါ့ :)
ကရင်ချောင်းကိုတော့ ရောက်ဖူးတယ်...ငယ်ငယ်က ..
တောတောင်တွေကို လျှောက်သွားရတာ ကြိုက်တယ်..။
အခွင့်ရှိရင် နောက်တစ်ခေါက်လောက်တော့ ထပ်သွားကြည့်ချင်သေးတယ်။
ဆတ်ကနဲ ကြွတ်တဲ့ သရက်ကင်းစိမ်းလေးတွေ သတိရသွားတယ် ... မြစ်ကျိုး ...! ( ဒူကဘာ )
ဒီပို့စ်လေးဖတ်နေတုံး ဟိုတခါ ခရမ်းသုံးခွဖက်ကိုလှေစီးသွားခဲ့တာ သွားသတိရမိတယ်.. လှေပေါ်ကအဆင်း ရွှံ့ စေးတွေ ချော နေတာ ၃ ခါလောက် ဘိုင်းကနဲ ပစ်လဲတာပဲ.. မျှော့တွေ ကျွတ်တွေ မရှိလို့တော်သေးတာပေါ့။
ရွာကလူတွေလည်း တကယ်စေတနာကောင်းကြတယ်၊ ဟန်ဆောင်မှု မရှိကြဘူး.. ရှိတာတွေ အကုန်ချကျွေးတော့တာပဲ..
ဆရာကျိုးပြောသလိုပဲ ငပိရည် တို့စရာ ..ရာသီပေါ်စာတွေက မပါမဖြစ်..
( ကုန်းပေါ် ရေပေါ် စစ်တိုက်တမ်းကစားခဲ့တော့ စစ်မှုထမ်းရရင် နေရာ မရွေးဘူး ပေါ့ လေ..း)))
ဖတ်ရင်းနဲ့ ပါးစပ်ချဉ်လာတယ်။ ကမ္ဘာအေးတက္ကသိုလ်တက်တုန်းက သရက်တက်ခူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ပါး သရက်ပင်ပေါ်က ပြုတ်ကျသွားခဲ့ဖူးတာကို ပြန်လည်မြင်ယောင်မိတယ်။ သရက်သီးစိမ်းကို ငါးပိနဲပတို့စားရင် ကောင်းမှကောင်းနော်။ ငယ်ငယ်က ရွှံ့တွေနဲ့တော့ ဆော့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုန်းဘုန်းတို့က တောင်ပေါ်သားဆိုတော့ ငါးတွေ၊ ပုဇွန်တွေနဲ့ဝေးလာဝေးပဲ။
ဒကာလေး ကိုမြစ် ကျန်းမာရွှင်လန်း အေးချမ်းပါစေ...
ဒီရာသီစာလေးဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်က အုတ်တံတိုင်းပေါ်တက်ပြီး သရက်သီးခူးစားတာကို သတိရသွားတယ်.
ဆား ငပိ၊ ငရုပ်သီးအထုပ်လေးပါ ထုပ်ပြီး သရက်ပင်ပေါ်တက်သွားတာ
ဗိုက်ဝမှ သရက်ပင်ပေါ်ကနေတစ်ဆင့် အုတ်တံတိုင်းပေါ် ပြန်ဆင်းလာတာ.. အဲဒီတုန်းက အိမ်ဘေးပတ်လည် သရက်ပင်တွေကြီးဆိုတော့ ဘယ်ပင်တက်တက် အသီးတွေ ပြွတ်ခဲနေတာ
အသက်လေးရလာလေ ငယ်ငယ်ကလို ဘယ်အရာမှ ပျော်စရာမကောင်းတော့တာ သိသာလာတယ်
ကိုမြစ်ကျိုး ပို့စ်တွေကိုဖတ်တိုင်း စမိပြီဆိုတာနဲ့
လို့မရဘူး၊ ဓလေ့ချင်းလည်း အတော်နီးစပ်တာလည်း
ပါမယ်၊ ပို့စ်တွေတိုင်းပေါ်လွင်အောင်၊ ရင်ဘတ်ထဲရောက်အောင်၊ စကားအသုံးအနှုန်း သတ်ပုံကအစပို့ပေးနိုင်တာ တော်တယ်ဗျာ၊ ကျေးဇူးပါ၊